Ururada Ardayda ee Jaamacadda/Jaamacaddaha Farsamada Sayniska | Vaikuttajan reittikartta
Ururada Ardayda ee Jaamacadda/Jaamacaddaha Farsamada Sayniska
Jaamacadaha iyo jaamacadaha sayniska, labadan qeybood ee tacliinta sare ee wadankan Finland, sharci ahaan ayaa waxaa looga baahan yahay in ay ardaydoodu dhegeystaan. Middowga ardayda ee jaamacadaha iyo jaamacadaha farsamada ayaa hubiya in codadka ardayda la matalo marka lagu jiro hanaanka go’aan gaarida marka laga hadlaayo arrimaha waxbarashada tacliinta sare. Middowga ardayda ee labada nooc ee jaamacada ayaa sidoo kale abaabula howlo badan oo caadi ah, sida tartamo-ciyaareed, si ardayda ay ugu nafisaan ka dib cadaadiskii waxbarashada ee ay ku jireen.
Wakiilada ardayda waxaa lagu doortaa doorashooyinka oo la qabto si joogto ah. Ardayda kasta ee jaamacada dhigta, oo ay ku jiraan ardayda is-dhaafsiga ee wadamada kale ka yimid, ayaa ordi kara booska oo noqon kara musharax. Masharaxiinta badankooda waxaa xusha ururada ardayda oona loo abaabulaa sida maadada ay bartaan iyo xisbiyada siyaasada ee ay lugta kula jiraan. Sabuuradaha fariinta ka fiiri iyo boostada oo adiga oo macluumaad dheeraad ah weydiinaya, tusaale ahaan, tusaale ahaan, guddiga matala ururka ardaydaada ama ardayda kale.
Jaamacadaha iyo jaamacadaha sayniska waxay leeyihiin ururo qaran oo u gooni ah kuwaas oo taageera ardayda oo u ololeeya danaha ardayda. Danaha ururka ardayda jaamacadaha sayniska waa Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry iyo danta ururka ardayda jaamacadaha waa Suomen ylioppilaskuntien liitto – SYL ry.